Okuphuthumayo akuhleliwe: Umnyango Wesifunda Sase-US ku-Ukraine Russia Threat & UAE Attack
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba zikaHulumeni » Okuphuthumayo akuhleliwe: Umnyango Wesifunda Sase-US ku-Ukraine Russia Threat & UAE Attack
I-114 min ifunde
Ngenxa yesimo esibucayi sokuhlasela okungenzeka kweRussia e-Ukraine, eTurboNews ihlinzeka ngombhalo ongahluziwe wenkomfa yabezindaba esanda kuphothulwa eMnyangweni Wezwe LaseMelika
I-US State Department Press Briefing, ngoMsombuluko zingama-24 kuJanuwari 2022,
Inguqulo engahleliwe ye-Raw
UNed Price, Okhulumela uMnyango
I-Washington DC, 2:39 pm EST 24 Jan 2022
MR PRICE: Sawubona. Umsombuluko omuhle. Kuhle ukubona wonke umuntu. Into eyodwa phezulu sizobe sesithatha imibuzo yakho.
I-United States iyakugxeka ukuhlasela kwamaHouthis ngobusuku obubodwa e-United Arab Emirates naseSaudi Arabia, okubangele ukulimala kwabantu eSaudi Arabia futhi kulandela ukuhlasela okufanayo kwamaHouthi ngesonto eledlule kwabulala izakhamuzi ezintathu e-Abu Dhabi. Siyakuqinisekisa kabusha ukuzibophezela kwethu ekusizeni ukuqinisa ukuzivikela kozakwethu baseSaudi ne-Emirati.
Lokhu kuhlasela kwe-UAE kanye ne-Saudi Arabia, kanye nokuhlasela kwezindiza kwakamuva eYemen kwabulala izakhamuzi, kubonisa ukwanda okukhathazayo okwandisa kuphela ukuhlupheka kwabantu baseYemeni.
Sicela bonke abathintekayo kulo mbango ukuthi bazibophezele ekuqedeni ukulwa, bathobele izibopho zabo ngaphansi komthetho wamazwe ngamazwe wobuntu, okuhlanganisa nalezo ezihlobene nokuvikela zonke izakhamuzi, futhi babambe iqhaza ngokugcwele ohlelweni lokuthula oluholwa yi-UN olubandakanya wonke umuntu.
Abantu base-Yemeni badinga ngokuphuthumayo isixazululo senxusa kule ngxabano, isixazululo senxusa esithuthukisa izimpilo zabo futhi sibavumele ukuthi banqume ngokuhlanganyela ikusasa labo.
Ngalokho, ngiyajabula ukuphendukela emibuzweni yakho. Yebo? Awu, ngizoqala ngibuyele lapho, njengoba ngethembisile. Ngiyacela.
UMBUZO: (Ayizwakali) kulolu daba, ngakho-
MR PRICE: Kulungile. Kuhle.
UMBUZO: Ngicela, ungibekezelele. Ukuhlasela kwamaHouthi kwanamuhla e-UAE kungokweshumi nantathu ezinsukwini eziyi-10 ezedlule. Ngakho-ke lokhu kuhlasela kuye kwashesha kamuva nje. Ngabe sizobona manje ukusheshisa okufanayo ohlelweni lokucatshangelwa kweBiden - ngabaphathi ukubhalisa amaHouthis ekuhlaselweni kwamaphekula?
MR PRICE: Ku- sorry, ngi-
UMBUZO: Ukuze ubabhalisele emuva ekuhlaselweni kwamaphekula?
MR PRICE: O, ukuwabala.
UMBUZO: Ngakho-ke lokhu kushesha kungaholela ekusheshisweni okufanayo kwenqubo yokucatshangelwa okunakekelwe abaphathi beBiden mayelana nokubabuyisela emuva ekuhlaselweni kwamaphekula?
MR PRICE: Ngakho-ke umbuzo wakho umayelana nesimo samaHouthi kanye nokuklanywa kabusha okungaba khona. Njengoba nazi, uMongameli ukhulume nalokhu ngesonto eledlule ngesikhathi ekhuluma nesizwe esithangamini sakhe sabezindaba ngoLwesithathu olwedlule. Uthe kucatshangelwa umbuzo wokuqokwa kabusha, ukwakhiwa kabusha kwe-Ansarallah, okuyigama lenhlangano yamaHouthi. Ngakho-ke angikho esimeni sokuxoxa nganoma yiziphi izinyathelo ezingase zicatshangelwe.
Nakhu engizokusho, nokho. Sizoqhubeka nokusebenzisana nozakwethu esifundeni, okuhlanganisa i-Saudi Arabia ne-UAE, ukuze sibasize bavikele kulokhu kuhlasela okudabukisayo kwamaHouthi. Njengoba idatha yokugcina engiyibonile ibonisiwe, ngosizo lwe-United States, uMbuso waseSaudi Arabia ukwazile ukuvimbela cishe amaphesenti angu-90 alokhu kuhlasela okuvela e-Yemen, okuvela kwaHouthis. Yebo, umgomo wethu, umgomo wethu esihlangene, uzowuthola - ukwenza lokho kube ngamaphesenti angu-100. Kodwa sisamile - sizoqhubeka nokuma nabalingani bethu kulokhu.
Nathi futhi, futhi sisaqhubeka nokubamba icala abaholi baseHouthi ngalokhu kuziphatha okuyihlazo. Sikhiphe unswinyo kubaholi ababalulekile nokuqokwa kwabaholi ababalulekile ezinyangeni ezedlule. Futhi sizoqhubeka nokucela wonke amathuluzi afanelekile kukhithi yethu yamathuluzi ukuthi baphendule lawa maHouthi, labo baholi bamaHouthi ababhekene nalokhu kuhlasela. Ngeke siyeke ukuqoka abaholi bamaHouthi nezinhlangano ezibandakanyeka ezinyathelweni zezempi ezisongela izakhamuzi nokuzinza kwesifunda, eziqhubekisela phambili izingxabano, ukwephulwa kwamalungelo abantu, noma ukwephula umthetho wamazwe omhlaba wobuntu, noma ezibhebhethekisa usizi olubi kakhulu lwesintu - ngokusho kwama-akhawunti amaningi. , inhlekelele yesintu ejule kakhulu ebusweni boMhlaba.
Kepha lokhu kuwukucatshangelwa okuyinkimbinkimbi, futhi sakhuluma nalokhu kucatshangelwa ezinsukwini zokuqala zokuphatha, cishe unyaka owedlule manje, lapho sikhuluma ngesinqumo sokuqala ngokumelene namaHouthis ngoba ngokwenza lokho kuzimisela nangokuza leso sinqumo sokuqala, salalela idlanzana lababambe iqhaza. Sezwa izixwayiso ezivela ku-UN. Silalele ukukhathazeka okuvela emaqenjini asiza abantu. Silalele amalungu amabili eCongress abephikisana nesinqumo sabaphathi bokugcina sokuqoka amaHouthi njengenhlangano yamaphekula yangaphandle, kwase kuba yi-STDT ngoba ngokuyinhloko, lokho kuzimisela okungaguquki kungaba nomthelela emandleni ethu okuletha nokuhlinzeka okudingeka kakhulu. usizo lokusiza izakhamizi zaseYemen.
Kungase futhi kube nomthelela ekufinyeleleni ezimpahleni eziyisisekelo njengokudla nophethiloli. Ngakho-ke sikuzwile lokho kukhathazeka kuzwakala futhi kucacile, futhi siyazi ukuthi cishe amaphesenti angama-90 wezimpahla ezibalulekile eYemen zingeniswa ngamabhizinisi azimele. Futhi ngenxa yokuqapha okukhulu, abahlinzeki balokhu - laba bahlinzeki nezikhungo zezezimali bangase bawuyeke lowo msebenzi, obalulekile ezidingweni zobuntu zabantu baseYemeni.
Ngakho sakuzwa lokho kukhathazeka ngokuzwakalayo nangokucacile. Sibheka ngokucophelela impendulo efanele, kodwa esizoqhubeka sikwenza, ngaphandle kokungabaza ngakho, ukuma ne-UAE, ukuma neSaudi Arabia, futhi sibambe iqhaza kubaholi baseHouthi ababhekene nalokhu kuhlasela kwamaphekula.
UMBUZO: Yebo, Ned, ukulandelela nje, amaphuzu amabili ngaphezulu kulolu daba: I-USA iphinde yasho ekutatimendeni kwangaphambilini - evela eMnyangweni Wezwe ngiyakholwa, kanye ne-White House - ukuthi izosekela i-UAE ekuvikeleni izindawo zayo. Ngakho-ke lokhu kusekelwa kuzovela kanjani ngendlela engokoqobo? Kukodwa lokho. Okwesibili, ingabe i-US izosiza ekuvimbeleni ukuhamba kwezikhali nokusekelwa kwezezimali kumaHouthis, uma kubhekwa iqiniso lokuthi basekelwa futhi besekelwa yi-Iran?
MR PRICE: Ngakho-ke embuzweni wakho wokuqala, sisebenza kakhulu nozakwethu base-Emirati, njengoba senza nozakwethu baseSaudi, ukubahlinzeka ngalokho abakudingayo ukuze basize ukuzivikela kulezi zinhlobo zokuhlasela. Sizoqhubeka nokwenza lokho. Sizoqhubeka nokusebenzisana nabo ngezindlela ezahlukene ukuze sibasize baziqinise ekulweni nalokhu kuhlasela.
Futhi umbuzo wakho wesibili mayelana -
UMBUZO: Yebo. Ingabe i-US izosiza ekuvimbeleni ukuhamba kwezikhali nokusekelwa kwezezimali kumaHouthis, uma kubhekwa iqiniso lokuthi basekelwa yi-Iran?
MR PRICE: Nakanjani. Futhi besisebenza kanzima kulokho, hhayi kulokhu kuphatha kuphela kodwa naphezu kokuphatha okulandelanayo. Uzwile ozakwethu boMnyango Wezokuvikela bekhuluma nokubanjwa olwandle, ngokwesibonelo, ngezikhali eziya eYemen kanye namaHouthi. Usibonile sikhanyisa ukukhanya okukhanyayo ezingeni losekelo olunikezwa i-Iran namaqembu asekelwa yi-Iran kumaHouthi. Usizwile sikhuluma ngeqhaza elidicilela phansi i-Iran nama-proxies ayo esifundeni sonke, futhi lokho kufaka phakathi e-Yemen, futhi lokho kufaka phakathi ukwesekwa kwe-Iran kwenhlangano yamaHouthi e-Yemen.
UMBUZO: Umbuzo uwukuthi: Ingabe uzomisa ukuhamba kwezikhali ngokomzimba? Ngisho ukuthi, ingabe uya (awuzwakali) amandla ezikhali? Ngisho, ngicabanga ukuthi lokho kuyisisekelo sombuzo.
MR PRICE: Yebo, futhi impendulo yami kulokho kwaba yebo, sizoqhubeka nokwenza konke esingakwenza ukumisa ukuhamba kwezikhali, usizo, -
UMBUZO: Ngakho-ke kungenzeka sibone, njengokuhlasela kwezindiza zaseMelika ukumisa ukuhamba kwezikhali?
MR PRICE: Ngiyaxolisa?
UMBUZO: Kungenzeka sibone ukuhlaselwa okuhloswe ukumisa ukuhamba kwezikhali ngamabutho aseMelika?
MR PRICE: Ubone isenzo esingaguquki sengxenye yalaba baphathi kanye nokuphatha kwangaphambilini ukumisa ukuhamba kwezikhali, ukumisa ukuhamba kwezinto eziya kumaHouthis, futhi lokho kufaka phakathi lokho abantu base-Irani abakunikezile.
UMBUZO: Ned, eRussia. Ngakho-ke kuzoba khona -
UMBUZO: - ucingo nabaseYurophu mayelana (okungezwakali) -
MR PRICE: Hhayi-ke, siyaxolisa, asivale - asivale i-Yemen, bese sizoza eRussia.
UMBUZO: AbakwaHouthis bathi bebeqonde esikhungweni sezindiza saseMelika e-UAE izolo, kanti amasosha aseMelika athe adubule amaPatriot avimbe imicibisholo yawo. Ingabe kuzoba khona ukusabela kwe-US kumaHouthi, futhi ikakhulukazi ukuthi baqondise amabutho ase-US e-UAE?
MR PRICE: Sizoqhubeka nokubamba amaHouthi ukuthi aziphendulele ngalokhu kuhlasela kwamaphekula. Sizokwenza lokho ngezindlela ezahlukene. Sesisebenzise inani lamathuluzi kakade, futhi ngisola ukuthi uzosibona siqhubeka nokwenza lokho ezinsukwini nasemavikini azayo.
UMBUZO: Enye futhi eYemen.
MR PRICE: Yebo.
UMBUZO: Ingabe i-US isifinyelele isiphetho esihlukile mayelana nokuthi ungaba yini umthelela ekulethweni kosizo ngegama? Futhi uma kungenjalo, kungani ujabulisa lo mbono?
MR PRICE: Hhayi-ke, sixoxisana nabanye balabo ababambiqhaza engibashilo ngaphambili ukuze siqhubeke nokuzwa imibono yabo, siqoqe imibono yabo. Impela okunye ukukhathazeka esakuzwa ngonyaka odlule kusazosebenza. Umbuzo uwukuthi ukuthi singakwazi yini - ukuthi ukuklama kabusha kungaba - kungaba okuzuzisa i-United States, kungaba ezintshisakalweni zethu zezokuphepha, kube ngokwezintshisakalo zezokuphepha zozakwethu esifundeni, futhi kungaba ezintshisakalweni sinokubona ukuphela kwezingxabano kanye nesimo esiphuthumayo sobuntu eYemen.
Ngakho-ke bekunzima - isethi enzima yezinto esizikalayo, kodwa njengoba uMongameli eshilo, siyasicubungula - sicubungula isinqumo.
Noma yini enye e-Yemen? Humeyra.
UMBUZO: Kulungile. Thatha ezimbili. ERussia, ngakho-ke kuzoba nocingo nabantu baseYurophu namhlanje ntambama noMongameli Biden. Bengizibuza - lokhu kubuzwe esithangamini se-White House, kodwa uma ungasikhanyisela kancane ngalokho abaphathi abanethemba lokukufeza ngalolu cingo. Futhi simzwile uMongameli uBiden ngesonto eledlule evuma esidlangalaleni imifantu engaphakathi kwe-NATO Alliance kanye nabaseYurophu mayelana nokuthi - kanjani ngempela ukuphendula. Ingabe kube khona ukuthuthuka kusukela ngaleso sikhathi kwabaseYurophu? Ingabe ususondele ekubeni sekhasini elifanayo? Futhi ingabe sikhona isizathu sokuthi silindele ukuthi ngemva kwalolu cingo uzobe ungolunye ekhasini elifanayo lokuthi ungasabela kanjani ekungeneni okuncane, noma ukuhlasela okukhulu, noma ngabe kungaba yini?
MR PRICE: Kulungile. U-Humeyra, njengoba wazi, besiseYurophu ngesonto eledlule. SasiseKyiv. Sabe sesiya eBerlin, lapho ngaphezu kokuhlangana nabalingani bethu baseJalimane uNobhala wathola ithuba lokuhlangana ne-European Quad ebizwa ngokuthi. Ngaphambi kwalokho, besiseYurophu ngenyanga edlule lapho sibe nethuba lokuhlangana nabalingani bethu be-NATO, ne-OSCE. Emasontweni adlule, uNobhala, iPhini likaNobhala, uNobhala Wezwe Ongaphansi Wezindaba Zezombusazwe, ingasaphathwa eyokuthi uMongameli kanye noMeluleki Wezokuphepha Kazwelonke kanye nabanye abaningi babesocingweni njalo nabalingani nabalingani ukuxoxa ngalolu dlame lwaseRussia kanye impendulo.
Futhi ngifuna ukubhekana nesisekelo sombuzo wakho ngoba kukho konke lokho kuhlanganyela - ukusebenzelana komuntu mathupha, izingxoxo, izingqungquthela zamavidiyo - kukho konke okunye kwalokhu kuhlanganyela, sizwile, futhi nawe uzwile. hhayi kithina kuphela kodwa okuvela kubalingani bethu baseYurophu nabalingani bethu, ababambisene nabo ngabanye, i-NATO, i-OSCE, i-G7, i-European Union, i-European Council - uzwile umyalezo ofanayo: Uma noma yimaphi amabutho aseRussia ewela umngcele, lokho kuyavuselelwa. ukuhlasela; kuzohlangatshezwana nempendulo esheshayo, eqinile, futhi ebumbene ngasohlangothini lwe-United States kanye nasohlangothini lwabasizi bethu.
Ngakho akukho ukungaqondakali ngalokho. Akukho ukungaqondakali. Akukho ukukhanya kwasemini. Siyakwazi lokho. Futhi okubalulekile, iRussian Federation iyakwazi lokho.
UMBUZO: Kulungile. Ngakho-ke, ngiyabonga. Kukhona ukukhanya kwemini kancane, kodwa ngeke ngikujabulise lokho isikhathi eside kakhulu. Bengi—ngiyazibuza, ningasikhanyisela kancane kulokho enifuna ukukuzuza ngalo mhlangano? Futhi-ke ngizodlulela kokungelona iphepha.
MR PRICE: Hhayi-ke, ake ngibuyele emazwini akho aphikisayo - futhi mhlawumbe bekuhloselwe ukuthi kube ukuphawula nje, kodwa angikwazanga ukumelana.
UMBUZO: Cha, ukuthi nje, ngiqonde ukuthi, uMengameli ushilo ukuthi kukhona ukuhlukana kwemibono, futhi lokhu kube yinto ebesibhekana nayo. Besibona ukuthi yini -
MR PRICE: Enikuzwile kuMengameli, enikuzwile kuNobhala, enikuzwile kuMeluleki Wezokuphepha Kazwelonke, enikuzwile kwabanye ukuthi uma kwenzeka iRussia ihlasela i-Ukraine, kuzoba khona impendulo. Kuyoba ngokushesha; kuzoba nzima. Uma kwenzeka ukuhlasela, kuzoba okungakaze kwenzeke ngokwezinyathelo esizimisele ukuzithatha.
Futhi ungasho ukuthi kukhona ukukhanya kwemini, kodwa ngithemba ukuthi nawe ubheke futhi ulalele izitatimende eziye zavela ezinhloko-dolobha zaseYurophu, izitatimende eziye zavela ku-NATO, kusukela ku-OSCE, kusukela ku-G7, kusukela ku-European Commission, kusukela e-United States, kusuka kubalingani bethu abami eduze kukaNobhala u-Blinken, noma ngabe lowo kwakunguNgqongqoshe Wezangaphandle u-Baerbock, noma ngabe kwakungabanye ababambisene nabo kanye nozakwethu esihlangane nabo emasontweni asanda kwedlula nasezinyangeni ezimbili ezedlule.
Ngakho umuntu angathi kukhona ukukhanya kwemini; kodwa ngokuqinisekile, uma ubheka umthamo kanye nezinto ezivelele ngaphakathi kwerekhodi lomphakathi, ngicabanga ukuthi lokho kungakuphikisa lokho kugomela.
UMBUZO: Ingabe nina bafana nizothumela lokhu okungelona iphepha, njengaleli sonto? Ungakwazi ukukhuluma kancane mayelana nobuchwepheshe balokho, ukuthi buzohlanganisani?
MR PRICE: Ngakho-ke njengoba uNobhala esho ngoLwesihlanu, silindele ukuthi sibe sesimweni sokuthumela impendulo ebhaliwe kuleli sonto. Ngaphambi kokuthi senze lokho, nalokho esikwenzayo njengamanje - futhi lokhu kufinyelela embuzweni wakho wangaphambili mayelana nokusebenzisana nabalingani bethu base-Europe kanye nozakwethu - ebesikwenza, njengoba wazi futhi njengoba ubonile, ukusebenzelana njalo ukubonisana nabalingani bethu kanye nozakwethu ngakolunye uhlangothi lwe-Atlantic.
Besikwenza lokhu ngokwempendulo engakaze ibonwe, esheshayo, eqinile, eqinile, ebumbene iRussia engayibekezelela uma kwenzeka iqhubeka nobudlova, kodwa futhi besikwenza kumongo wempendulo ebhaliwe esizoyinikeza. ku-Russian Federation, njengoba besikwenza siphendula kulokho ebesikusho mayelana nezindawo lapho okungenzeka kube khona inqubekelaphambili ezinyathelweni ezihambisanayo ezingase zithuthukise ukuphepha kwethu kweqoqo. Futhi ngokuphepha okuhlangene, ngiqonde ukuphepha komphakathi owela i-Atlantic kodwa futhi okungenzeka ngibhekane nokunye okukhathazayo okubekwe yiRussia.
Ngakho-ke njengoba sicabangela isinyathelo esilandelayo ekuhlanganyeleni kwethu - futhi okungukuthi, empeleni, ukuhlinzekwa kwempendulo ebhaliwe ku-Russian Federation - sabelana ngaleyo mibono nathi - futhi sabele leyo mibono nabalingani bethu baseYurophu nabalingani bethu. Sithatha impendulo yabo. Sihlanganisa leyo mpendulo empendulweni ebhaliwe. Futhi uma sesilungele ukuyidlulisela, sizokwenza. Ngilindele ukuthi lokho kuzoba kuleli sonto.
UMBUZO: Ned, ngakho-ke uthe akukho ukukhanya kwemini ekuphenduleni, futhi sizobona lokho. Kepha kukhona ngokusobala - futhi kusesidlangalaleni lapho - ukukhanya kwasemini mayelana nokuchazwa kosongo. AbaseYurophu, amaFulentshi, nabanye, uMnu. Borrell, babonakala becasulwe ithoni ethusayo eWashington mayelana nosongo oluseduze, futhi - bebelokhu bethi akumele sihlaselwe yizinzwa. ukuze ehlise umoya, futhi asiboni lokho kusongela okuseduze njengoba i-US isho. Usasho ukuthi kukhona - kukhona usongo oluseduze lokuhlaselwa? Kungani kunomehluko phakathi kwakho nabaseYurophu?
MR PRICE: Francesco, asiwuboni umehluko obhekisele kuwo.
UMBUZO: Bayakusho. Basho esidlangalaleni ukuthi -
MR PRICE: Esikubonayo nalokho ongakubona nakho kuyizitatimende. Futhi izitatimende - isitatimende sokuthi, ngokwesibonelo, sivela kuKhomishani YaseYurophu eyasho ngokufana ngokuphawulekayo uma kungenjalo - uma kungenjalo ngolimi olufanayo esitatimendeni esiphuma ku-G7 ku-NATO mayelana nemiphumela ezokwehlela iRussian Federation uma kwenzeka. yobudlova obunjalo ngokumelene ne-Ukraine. Kuye - lena bekungeyona i-United States kuphela eyenza leli cala. Besikhuluma njengekhorasi nabalingani bethu base-Europe kanye nozakwethu, nezikhungo nezinhlangano ezihlangene ezifana ne-NATO ne-OSCE kanye ne-G7. Futhi futhi, uma ubheka ulimi - futhi ngeke umangale ukuzwa lokhu bekungelona iphutha - uzobona ulimi olufanayo ngokumangalisayo kubo bonke esibambisene nabo kanye nozakwethu nakuzo zonke lezi zikhungo ezihlangene.
Uma kukhulunywa ngalokho amaRussia akuhlelile, kusobala njengosuku ukuthi noma ngubani angabona ukwakheka okukhulu kwamabutho aseRussia emingceleni yase-Ukraine. Besikucacele kakhulu okusikhathazayo uma kuziwa kwezinye izinhlobo zobudlova nokucasula abantu baseRussia abangase bafune ukuzithatha futhi asezithathile. Kepha munye kuphela umuntu owaziyo ukuthi iRussian Federation isigcinele i-Ukraine, lowo nguVladimir Putin.
Umgomo wethu bekuwukuvimbela nokuvikela kunoma yiziphi izinhlelo ezinjalo, njengoba nje sikulungele ukuqhubeka nendlela yokuxoxisana nezingxoxo. Usibonile siqhubeka phansi naleyo ndlela yokuxoxisana nezingxoxo ngendlela eqotho neqinile emasontweni adlule. Ukuhambela kukaNobhala eGeneva ekugcineni ngesonto eledlule bekuyisinyathelo sakamuva kuleyo nqubo ephinde yabandakanya iPhini likaNobhala emihlanganweni yakhe neRussian Federation ku-Strategic Stability Dialogue, imihlangano yoMkhandlu we-NATO-Russia, ukuxoxisana ngokomongo. ye-OSCE, kanye nabanye ababambisene nabo bebelokhu bexoxisana neRussian Federation kuze kube manje.
Ngakho-ke ukuze sicace kakhulu, sizimisele ukuqhubeka nalo mzila. Le ndlela ingaba yimpumelelo kuphela uma yenzeka kumongo wokwehlisa izinga. Kodwa ngenxa yokuthi simi ngomumo futhi sibambe iqhaza enqubweni nasendleleni yokuxoxisana nezingxoxo akusho ukuthi asizilungiseleli ngendlela yokuzivikela kanye nesithiyo. Senza kokubili ngesikhathi esisodwa ngokunembile ngoba sikulungele noma yikuphi ukukhetha okwenziwa uVladimir Putin.
UMBUZO: Futhi ingabe ucabanga ukuthi kukhona usongo oluseduze lokuhlaselwa, ukuthi ukuhlasela kungase kusondele, ngokushesha, njengoba abeLungu bethi uyabatshela, ngokusho kobuhlakani bakho?
MR PRICE: Hhayi-ke, besikucacele lokhu kunoma yiliphi inani lezindawo, kuhlanganisa nokwelulekwa kwe-consular esikukhiphe izolo ebusuku. Usongo esilubonayo olucacile hhayi kithina kuphela kodwa lucacela noma yimuphi umuntu obukele nje uma kubhekwa okwenzekayo ngasemingceleni yase-Ukraine, okwenzeka ngaphakathi kwendawo okufanele ibe yizwe elizimele laseBelarusian, kuyimbangela yokukhathazeka okukhulu. Ngakho-ke sithatha izinyathelo ezihlakaniphile. Thina, vele, sabelana ngolwazi nobuhlakani nabalingani bethu okukhuluma ukukhathazeka kwethu futhi siphinde sikhulume neqiniso lokuthi amaRussia abonakala ekulungele ukuthatha isinyathelo esinolaka ngokumelene ne-Ukraine nganoma yisiphi isikhathi.
UMBUZO: Kepha ukulandela iphuzu likaFrancesco -
UMBUZO: Futhi owokugcina nje. Ngabe kufanele silindele ukuhlangana okusha noma umhlangano noma umhlangano obonakalayo phakathi kukaNobhala kanye noNgqongqoshe Wezangaphandle uLavrov ngemuva kwempendulo yakamuva?
MR PRICE: Hhayi-ke, uzwile ngoNgqongqoshe Wezangaphandle ngesonto eledlule. Nawe uzwe ngoNobhala ngeledlule ukuthi sizokunikeza impendulo ebhalwe phansi. Sivuleleke ekuxoxisaneni okwengeziwe, ukusebenzelana komuntu mathupha, uma kungaba njalo - uma kungase kubonakale kuwusizo uma sicabanga ukuthi kungakha, uma sicabanga ukuthi kufanele kube into elandelayo njengoba siphishekela indlela yezingxoxo nezokuxhumana. Ngakho sivulekele kukho.
UMBUZO: Ukulandela imibuzo kaFrancesco, emizuzwini embalwa edlule umkhulumeli wePentagon uthe, futhi ngicaphuna lapha, ukuthi uma i-NATO kufanele isebenze i-NRF, bonke batshele inani lamandla uNobhala uMnu. izisebenzi ezingaba ngu-8,500. Kulokho - kuleso silinganiso, lowo owayeyinxusa laseMelika e-Ukraine uJohn Herbst utshele i-NPR ekuseni ukuthi ucabanga ukuthi noma iyiphi inkulumo yokuthi amasosha aseMelika athunyelwe njengesivimbeli esengeziwe bekufanele ngabe seyenziwe ngaphambi kwamanje. Kungani kufike kule mpelasonto lapho abaphathi beBiden bethatha isinqumo sokubeka amabutho ase-US esikhundleni esithunyelwe njengengxenye ye-NATO ukuthumela umyalezo kuVladimir Putin?
MR PRICE: Hhayi-ke, ake ngenze amaphuzu ambalwa. Okokuqala, ngizohlehlisa uzakwethu kanye nomanduleli wami ukuthi bakhulume nezinhlelo iPentagon esebenza kuzo, kodwa uMongameli uye wacacisa ngemiphumela engase yenzeke iRussian Federation uma iRussia ibingaqhubekela phambili nolaka olwengeziwe. ngokumelene ne-Ukraine. Sikhulume ngemiphumela yezomnotho nezezimali iRussia engayibekezelela okungenzeka ngezindlela eziningi ingakaze ibonwe ngaphambili, izinyathelo esikhethe ngokungananazi ukuzithatha ngemuva konyaka ka-2014. Sikhulume ngamaleveli engeziwe osizo lokuvikela esilimele. singalungela ukunikeza ozakwethu base-Ukraine, ngaphezu nangaphezulu kwezigidi ezingu-650 zamaRandi esizinikeze i-Kyiv phakathi nonyaka odlule kuphela. Lolo wusizo lwezokuphepha oluningi kunalokho olwake lwanikezwa ngonyaka owodwa kozakwethu e-Ukraine.
Kodwa uMengameli ubuye wacaca ukuthi uma amaRussia aye phambili, sizoqinisa lokho okubizwa ngokuthi impumalanga ye-NATO. Kodwa njengoba sesishilo lokho, asikaze sikukhiphe ngaphandle inketho yokunikeza usizo olwengeziwe ngaphambi kokuhlasela okungenzeka. Futhi ngakho-ke kunemiphumela eminingana esiyishilo ukuthi iRussian Federation izobekezelela. Kunezinyathelo ezimbalwa esizithathayo manje mayelana nosizo lwethu lokuvikela oluya e-Ukraine, mayelana nemiyalezo evimbelayo esiyibeka phambili mayelana nemiphumela ezokwehlela i-Russian Federation, futhi manje lokho okuzwayo. kozakwethu ePentagon.
UMBUZO: Ngemuva kwalokho, ngabe lezi zingxoxo mayelana nokuthi asetshenziswe amasosha ase-US - ngabe lokho bekuyingxenye yempendulo eqhubekayo kubaphathi beBiden ngaphambi kokuthi le mibiko yaziwa esidlangalaleni kule mpelasonto? Ingabe leyo bekuyingxenye esebenzayo yengxoxo yokuthi kwenziwa kanjani ukubhekana nobudlova baseRussia?
MR PRICE: Ngingasho ngokuvamile, ngaphandle kokukhuluma nezingxoxo zangaphakathi, ukuthi into efana nalena ngokuvamile ngeke ibe sesidlangalaleni uma yethulwa nje. Besicabanga izinyathelo ezimbalwa, futhi uzwa i-Pentagon ikhuluma ngayo esidlangalaleni namuhla. Iqiniso lokuthi bakhuluma ngayo esidlangalaleni namuhla liphakamisa ukuthi akusona isithako esisha njengoba sicabangela impendulo yalokho esikubonayo manje.
UMBUZO: Ingabe lokhu kuklanyelwe ukwenza amaRussia mhlawumbe acabange kabusha ukuthunyelwa kwamasosha engeziwe ngaphakathi kweBelarus futhi azame ukuqinisa ubukhona bawo engxenyeni eseningizimu ye-Ukraine?
MR PRICE: Umgomo wethu kukho konke lokhu ukuvikela kanye nokuvimbela. Ngakho-ke sithatha izinyathelo eziningi zokuvikela i-Ukraine, okuhlanganisa nokuhlinzeka ngosizo lokuvikela oluvikelayo, kodwa sithatha izinyathelo ezimbalwa zokuvimbela lokho i-Russian Federation kanye nalokho u-Vladimir Putin angase abe nakho engqondweni. Ngakho embuzweni wakho, yebo.
UMBUZO: Bese kuba nesinye futhi: Inxusa laseMelika ku-UN linikeze isithangami ekuqaleni kwanamuhla, futhi umbuzo wavela ukuthi hlobo luni lwezingxoxo abenazo namanye amalungu oMkhandlu Wezokuphepha ngalesi simo, futhi Inxusa uThomas-Greenfield uze wavumela ukuthi ubekhuluma nozakwabo waseRussia. Ubekwe icala lini lokusho kuNxusa uNebenzya mayelana nosongo i-US olubonayo ekubuseni kwe-Ukraine? Futhi kungani i-US ingazange ifuqe umhlangano woMkhandlu Wezokuphepha ngalolu daba ngaphambi kokuba iRussia ithathe isikhundla sobumongameli ngoLwesibili oluzayo?
MR PRICE: Hhayi-ke, ngicabanga ukuthi nawe uzwile ngeNxusa ukuthi ubesebenzisana kakhulu nozakwabo eMkhandlwini Wezokuphepha kanye nozakwabo ababanzi e-UN. Uvumile ukuthi uke waxhumana nozakwabo waseRussia, kodwa ngingakuqinisekisa - futhi ngicabanga ukuthi njengoba nawe wezwa kuye - ukuthi uzakwabo waseRussia akuyena yedwa uzakwabo akhuluma naye. Futhi ngingalindela ukuthi uzozwa kuye ukuthi ukusebenzelana kwakhe nabalingani bethu, kuhlanganise nalabo abaseMkhandlu Wezokuphepha, kanye nozakwethu kuye kwaba kukhulu kakhulu kunokusebenzelana kwakhe nozakwabo waseRussia eMkhandlwini Wezokuphepha.
Kodwa mayelana nomlayezo, umyalezo amaRussia abelokhu ewuzwa kithi ucacile futhi nawo ubulokhu ungashintshi. Kuye kwacaca futhi kuvumelana emphakathini; bekucacile futhi kuvumelana ngasese. Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, sikhetha indlela ye-diplomacy kanye nenkhulumomphendvulwano. Sikholelwa ukuthi ukuphela kwendlela enomthwalo wemfanelo yokuphishekela ukwehla nokuqeda udlame oluqhubekayo lwase-Russia olubhekene ne-Ukraine nokuthi yini - noma yiziphi ezinye izinhlelo i-Russian Federation okungenzeka inazo. Bazwile futhi - futhi bakuzwile lokhu ekuxoxisaneni kwethu kwangasese, kodwa futhi nasesidlangalaleni kakhulu - ukuthi njengoba nje silungiselele inkhulumomphendvulwano nediplomacy, siphishekela ukuzivikela kanye nokuvimbela, futhi sikukhulumile lokho. kakhulu kakade namuhla. Kodwa amaRussia ayazi, ngoba akuzwile kithi ngokuqondile, ukuthi sikulungele ukuhlanganyela. Bayazi ukuthi kunezinkinga ezithile lapho sicabanga ukuthi inkhulumomphendvulwano kanye nezokuxhumana kungase kubuye kube kuhle ekuvikelekeni kwethu kweqoqo, ukuphepha okuhlangene komphakathi we-transatlantic, futhi kungasiza ekuphenduleni okunye ukukhathazeka okwenziwe yi-Russian Federation.
Kodwa nabo bazwile ngathi, futhi lokhu kubaluleke kakhulu, ukuthi kunezinye izindawo, kuhlanganise nenqubomgomo ye-NATO "Open Door", lapho ingekho indawo yokuhweba. Lutho neze. Ngakho kukho konke ukusebenzelana kwethu, noma ngabe nguNobhala, iPhini likaNobhala, iNxusa uThomas-Greenfield, leyo miyalezo ibicacile futhi ingaguquki.
UMBUZO: Ned, ngifuna ukushintsha izihloko.
MR PRICE: Noma yini enye evuliwe - kulungile, ngiyabona kungase kube neminye imibuzo embalwa. UBen.
UMBUZO: Yebo, ukuphuma kwengxenye yenxusa kubonisa ngokusobala ukuthi ukhathazekile ngokuphepha kwabantu baseMelika e-Ukraine. Futhi ukubeke kwacaca ukuthi kuzokwenzekani uma iRussia ingahlasela. Ngabe uzothatha leli thuba manje futhi ukuxwayisa iRussia ngokulimaza noma yibaphi abantu baseMelika futhi usho ukuthi kungaba yini umphumela uma benze njalo?
MR PRICE: Ngakho-ke ake ngithathe lowo mbuzo futhi ngicacise ukuthi akukho okubaluleke kakhulu kithi kunokuphepha nokuvikeleka kwabantu baseMelika emhlabeni jikelele. Futhi izolo ebusuku usizwile sikhuluma ngezinyathelo ezihlakaniphile esizithathayo mayelana nomphakathi wethu wezokuxhumana e-Kyiv, sazi ukuthi amaRussia analeli qembu elikhulu lezempi, elingase lilungele ukuthatha isinyathelo esinolaka nganoma isiphi isikhathi. Ngakho-ke ukuhamba okugunyaziwe kwezisebenzi ezingezona ezezimo eziphuthumayo zehhovisi lethu lenxusa kanye nokuhamba okuyaliwe kwabondliwa kuyingxenye futhi kubonisa into ebaluleke kakhulu esiyinamathisela ekuphepheni nasekuvikelekeni kwabantu baseMelika.
Angifuni ukungena ezingxoxweni eziyimfihlo, kodwa sikwenze kwacaca kakhulu kubantu baseRussia into yokuqala esiyinamathisela ekuphepheni nasekuvikelekeni kwabantu baseMelika. Bayazi ukuthi lokho kuyinto eza kuqala kithi. Bayazi ukuthi senza okusemandleni ethu ukuze sivikele ukuphepha nokuvikeleka kwabo. Futhi ngizoyishiya kanjalo.
UMBUZO: Ngokwezibalo zabantu, baseMelika ngaphakathi e-Ukraine, izolo ngiyazi ukuthi uMnyango Wezwe ubungeke udwetshwe izinombolo eziqondile. Kodwa ingabe lokho kungenxa yokuthi awazi ukuthi bangaki noma ngeke usho ukuthi bangaki abantu baseMelika abangaphakathi kwe-Ukraine?
MR PRICE: Umgomo wethu uhlale uwukuhlinzeka ngolwazi olufika ngesikhathi nolunembile, futhi njengamanje asinaso - isibalo esisithatha njengenemba inani lamaMelika, amaMelika azimele, ahlala e-Ukraine, futhi ngizosho. wena ngani. Ukuzwile lokhu kumongo we-Afghanistan, kepha lapho abantu baseMelika behambela phesheya kwezilwandle, akudingekile ukuthi babhalise nenxusa ezweni. Sihlala sikhuthaza abantu baseMelika ukuthi babhalise lapho bevakashela phesheya ngesistimu yethu ebizwa nge-STEP, kodwa ngicabanga ukuthi abaningi benu bangafakaza, uma uya phesheya kwezilwandle ungase ungakwenzi lokho ngaso sonke isikhathi. Futhi abanye benu cishe abakaze bakwenze lokho.
Ngokufanayo, lapho abantu baseMelika besuka ezweni, kuzodingeka bazikhiphe ohlwini. Futhi ngenxa yokuthi abaningi bangahle bangabhalisi kwasekuqaleni, ngicabanga ukuthi kuwukucabanga okuphephile ukuthi abaningi - labo ababhalisayo empeleni bangahle bangazisusi kuleyo nhlangano yezakhamizi zaseMelika okungenzeka ukuthi zihlala kwelinye izwe.
Elinye iphuzu ukuthi noma abantu bebhalisa, uMnyango Wezwe awukho esimweni sokuqinisekisa ngokuzimela ukuthi umuntu obhalise ku-STEP, lokho okubizwa ngokuthi uhlelo lwe-STEP, empeleni uyisakhamuzi saseMelika. Ngakho-ke kukhona inombolo - ngenxa yezizathu ezimbalwa, izibalo - asinalo nje izibalo ezinembile okwamanje.
Lapho sithumele umlayezo nabantu baseMelika - emphakathini wangasese wezakhamizi zaseMelika e-Kyiv, e-Ukraine ezinsukwini ezisanda kwedlula, sibakhuthaze ukuthi bagcwalise ifomu elizosisiza ukuthi sithole imbudumbudu ngosayizi womphakathi waseMelika ozimele wesakhamuzi saseMelika. e-Ukraine. Kodwa lokho akuyona nje into esinayo njengamanje.
UMBUZO: Nokunye futhi. Ukhulume nge-Afghanistan. Ngiyazibuza ukuthi ngabe kukhona - ingabe kukhona okuvela e-Afghanistan okufundile mayelana nokuhlonza nokuhlenga abantu baseMelika endaweni yempi ocabanga ukuthi ingasetshenziswa lapha?
MR PRICE: Nokho, lezi ngokusobala akuzona izimo ezifanayo, ngakho-ke ngingakuzonda ukuphakamisa okuhlukile. Inkokhelo yethu eyinhloko ukugcina umphakathi wezakhamuzi zase-US unolwazi mayelana nentuthuko yezokuphepha nokuvikeleka. Yilokho esikwenze muva nje izolo kusihlwa lapho sikhipha i-Travel Advisory ebuyekeziwe kanye ne-Media Note ehambisana nayo ukuze sibazise ngentuthuko yezokuphepha nokuvikeleka. Futhi lokho kungafaka imininingwane yezinketho zohambo lwezentengiso.
Lokhu sikwenze ngoba, njengoba uMengameli eshilo, impi yaseRussia ingafika noma nini. Futhi sonke siyazi futhi sonke sizibonile izinkomba zokuthi kunjalo, uma kubhekwa ukwakhiwa kwezempi okukhulu. Siphinde sacaca ukuthi ngeke sibe sesimweni sokukhipha izakhamizi zase-US, izakhamuzi zase-US ezizimele, esimweni esinjalo. Futhi yingakho sikhuthaze izakhamuzi zase-US ezizimele okungenzeka zibe se-Ukraine ukuthi zihlele ngokufanele, okuhlanganisa nokuzitholela izinketho zezohwebo uma zikhetha ukulishiya izwe. Noma sinciphisa ubukhulu bendawo yenxusa lethu, inxusa likhona ukusiza izakhamizi zaseMelika kulokhu. Singaphakathi - sinekhono lokuhlinzeka, ngokwesibonelo, imalimboleko yokubuyisela kunoma yibaphi abantu baseMelika abafuna ukuzitholela lezo zinketho zentengiso ukuze babuyele e-United States.
UMBUZO: Ngingakwazi ukulandela ku-
UMBUZO: Uma ungenankinga.
UMBUZO: Okokuqala, yini ofuna ukuyizuza emhlanganweni no-Biden aba nawo - nabaholi baseYurophu? Cishe yakhela emhlanganweni kaMnu. Blinken namhlanje ekuseni. Ngakho-ke yini ofuna ukuyizuza kulokho?
Ababili, emhlanganweni ekuseni uMnu. Blinken abe nawo noMkhandlu WaseYurophu, uthole imibuzo mayelana nesinqumo saseMelika sokuqala ukudiliza ihhovisi lenxusa? Ngenxa yokuthi abanye abantu baseYurophu abekho ekhasini elifanayo, futhi njengoba uFrancesco esho, siphakamisa ukuthi inkulumo-ze idinga ukudayela kancane, ukuthi akukho mehluko kwezokuphepha ukuphakamisa ukuhlasela okuseduze. Ngakho-ke yini olindele ukuyizuza, futhi yini uMnu. Blinken ayizwayo mayelana nendlela yaseMelika?
MR PRICE: Ngakho-ke njengoba usho, u-Barbara, uNobhala ubambe iqhaza ekuqaleni kwanamuhla eMkhandlwini Wezindaba Zangaphandle we-EU. Umenywe yi-EU High Representative uJosep Borrell. Ukukuzwisa ubumnandi balokho, uNobhala wazise ozakwabo ngokuvakasha kwakhe ngesonto eledlule eKyiv, eBerlin, naseGeneva. Njengengxenye yomzamo, sikhulume nawo - ukwehlisa ukushuba kwesimo esidalwe ukwakheka kwezempi okungaphenduki kweRussia kanye nokuqhubeka kwayo nokuhlasela i-Ukraine.
Engxoxweni namuhla ekuseni, uNobhala ugcizelele ukuthi sizoqhubeka nokusebenzisana eduze ne-EU kanye namazwe angamalungu ayo ngaphezu kwezinye izikhungo ezihlangene esezishiwo. Leyo yi-NATO, leyo yi-OSCE, futhi inabalingani ngabanye nabalingani. Futhi phakathi nalo mhlangano, uNobhala ukukhombisile lokho ngokubatshela ngezingxoxo ngesonto eledlule, okuhlanganisa nokuxoxisana noNgqongqoshe Wezangaphandle uLavrov.
Ubonile ukuthi ngemuva nje kokuphothulwa komhlangano noNgqongqoshe Wezangaphandle uLavrov ngoLwesihlanu, uNobhala uphinde waba nethuba lokukhuluma nozakwabo wase-Ukraine ukuze amelane naye ngalezo zingxoxo, futhi lokho kuwumkhuba esiwenzile phakathi nazo zonke lezi zingxoxo. ukusebenzelana kwethu - nabalingani bethu base-Europe, ozakwethu bethu base-Europe, vele kuhlanganisa nozakwethu base-Ukraine, ngoba sisebenza ngokungananazi lutho ngabo ngaphandle kwabo. Akukho lutho nge-Ukraine ngaphandle kwe-Ukraine. Akukho lutho ngeYurophu ngaphandle kweYurophu. Akukho lutho nge-NATO ngaphandle kwe-NATO.
Ngakho ukubamba iqhaza kukaNobhala emhlanganweni namuhla kube elinye ithuba kwenye indawo ukuba senze lokho kanye. UMongameli, kunjalo, ubambe iqhaza kakhulu kulokhu. Ubonile ukuthi ubize iqembu lakhe, mathupha futhi, eCamp David ngempelasonto ukudingida lokhu. Ngakho-ke akufanele kusimangaze ukuthi uMongameli ezothola ithuba lokukhuluma nozakwabo ngazo kanye lezi zindaba esebenzisa leso simiso - enaleso simiso engqondweni.
Uma kukhulunywa ngesinqumo esisithathile izolo ebusuku, ngifuna ukuphinda ngiphinde iphuzu eliwumgogodla, nokuthi lokhu kumayelana nombandela owodwa kanye nombandela owodwa kuphela, futhi lokho ukuphepha nokuvikeleka kweqembu lethu phansi e-Ukraine. . Futhi kwakuyisinyathelo esihlakaniphile uma kuziwa ekuphumeni okuyaliwe kwabathembele. Kube yisinyathelo esihlakaniphile uma kuziwa ekuphumeni okugunyaziwe kwezisebenzi ezingabalulekile.
Kodwa mangikucacise futhi ukuthi leso sinqumo asisho lutho ngokuzibophezela kwethu ebukhosini be-Ukraine kanye nobuqotho bendawo yayo. Ukuzibophezela kwethu ebukhosini be-Ukraine nobuqotho bendawo akunyakazi. I-ambassy iyaqhubeka nokusebenza futhi icala, yiqiniso, lihlala e-Ukraine. Iqiniso lokuthi sithatha izinyathelo zokuqapha ezihlakaniphile ngenxa kanye nokuphepha kwezakhamizi zase-US akukona neze ukusekela kwethu noma ukuzibophezela kwethu e-Ukraine. Ubone ukuthi ukwesekwa kuthatha noma yiliphi inani lamafomu.
Yiqiniso, uNobhala wayevele e-Kyiv ngesonto eledlule, lapho umzwile ephinda le miyalezo eduze kukaMongameli Zelenskyy, eduze kukaNgqongqoshe Wezangaphandle kuleba. Siqhubekile nokuhlinzeka ngosizo lwezokuphepha oluvikelayo. Ukulethwa kokuqala kwenani elingeziwe lamaRandi ayizigidi ezingama-200 elagunyazwa ngoDisemba lafika eKyiv ngobusuku bangoLwesihlanu kwangoMgqibelo. Sizoqhubeka nokuhlinzeka ngosizo lokuvikela oluvikela ozakwethu bethu, futhi sizoqhubeka nokubonisa ngokungangabazeki ukuzibophezela okuhlala njalo esinakho kubuqotho bendawo kanye nobukhosi bukazakwethu i-Ukraine.
UMBUZO: Ngingakwazi ukulandela lokho?
MR PRICE: Ngiyacela.
UMBUZO: Ngoba uphinde wathi yisinyathelo esihlakaniphile, kodwa uHulumeni wase-Ukraine waphikisana ngokusobala nalesi sinyathelo futhi uMnyango Wezangaphandle namuhla ukubize ngokuqapha ngokweqile. Ngabe ukhona yini umqondo kubaphathi wokuthi lokhu bekungadala ukwethuka ngaphakathi kwe-Ukraine ngesikhathi lapho kuyilokho kanye iRussia ezama ukukwenza ngokususa ukungazinzi ezweni?
MR PRICE: Lokhu kumayelana nento eyodwa nento eyodwa kuphela, futhi -
UMBUZO: Uke wakucabangela ukwethuka obekungakudala?
MR PRICE: Ngiyaxolisa. Senzeni?
UMBUZO: Uke wakucabangela ukwethuka okungadalwa?
MR PRICE: Esikucubungulile ukuphepha nokuvikeleka kwabantu baseMelika. Futhi lesi yisinqumo uHulumeni wase-United States kuphela ongasithatha ngoba kuyinto esemqoka ukuthi sinamathisele ukuphepha nokuvikeleka, kulesi simo, ozakwethu kanye nemindeni yabo ngokunjalo. Lokhu akusho lutho ekusekeleni kwethu okungantengantengi, okungapheli kozakwethu base-Ukraine. Imayelana nento eyodwa nento eyodwa kuphela: ukucatshangelwa okuncane kakhulu kokuphepha nokuvikeleka kozakwethu.
UMBUZO: Kepha lokhu kuhlangene nesimemezelo sePentagon namuhla mayelana nokubeka amasosha ayizi-8,500 XNUMX endaweni elindile, ngaphezu kokuthunyelwe komphakathi ngoLwesihlanu nokufika kosizo olusha olubulalayo, kubukeka sengathi ukhulisa ingcindezi yakho lapha eRussia ngandlela thize. Uyakwenqaba lokho? Ucabanga ukuthi ukuma kwakho sekushintshile nakancane?
MR PRICE: Lokhu kumayelana nokuzivikela kanye nokuvimbela. Esikukhathazayo ukuthi kungenzeka kube nobudlova baseRussia. Lokho akuphathelene nokuzivikela. Lokho akuphathelene nokuvimbela. Lokho kumayelana nezenzo ezihlaselayo ngokumelene nezwe elizimele, izwe elizimele elinguzakwethu oseduze we-United States. Ngakho-ke ukulinganisa lezi zinto ezimbili akulungile kakhulu, futhi yilokho kanye esikuzwa eMoscow. Lezi yizici ezihlukene ngekhwalithi kanye nezinyathelo ezahlukene esizithathayo. Ukube abantu baseRussia bebengancipha, ubungeke ubone isethi efanayo yomnyakazo evela kozakwethu base-Ukraine, abavela ku-NATO, abavela e-United States.
Nali iphuzu elibanzi, futhi umzwile uNobhala ephindaphinda leli phuzu. Empeleni emhlanganweni noNgqongqoshe Wezangaphandle uLavrov ngoLwesihlanu wenze lokhu ngokuqondile, washo leli phuzu kuNgqongqoshe Wezangaphandle. Futhi uthe i-United States ngokweqiniso ayikuqondi ukuma kweRussia lapha ngoba kuyo yonke le minyaka nasesimweni salokhu kudlondlobala, uVladimir Putin kanye neRussian Federation baqede konke ebifuna ukukuvimba. Futhi umzwile uNobhala ekhuluma nokwesekwa okwandayo kobulungu be-NATO phakathi kwabantu base-Ukraine kusukela ngo-2014, amazinga okusekela asephindeke cishe kabili. Usizwile kanye ne-NATO njengombimbi sikhuluma nezinhlelo zokuqinisekisa ezaqalwa ulaka lwase-Russia olwalungahlosiwe olubhekiswe ku-Ukraine ngo-2014.
Ngakho-ke abantu baseRussia bangase bakhononde futhi baqaphele futhi bakhombe le mizamo yokuzivikela nokuvinjelwa, kodwa ulaka lwabo oluye lwengeza ngqo lokho esikuzwayo nokubabona bekhomba kukho.
Nakhu okunye ukukhathazeka, futhi asenzanga mathambo ngalokhu: ukukhathazeka kwethu ngokuthi amaRussia, njengoba enza ngo-2014, angase afune ukwenza izaba zokuhlasela okwengeziwe ngokumelene ne-Ukraine. Uma ubufuna ukwenza lokho, lokhu ngezinye izindlela bekungabukeka kanjani. Yilokho osekunesikhathi eside kusikhathaza. Kungakho singakhulumanga nje nalokho kukhathazeka ngobubanzi kodwa kungani sibeke phambili ulwazi esinalo olukhuluma ngezinyathelo okungenzeka ukuthi iRussian Federation iyazithatha ukuze kufezeke lokhu.
UMBUZO: Ngicela, elilodwa nje?
MR PRICE: Ake ngivumele uConor aqedele.
UMBUZO: Cha, kulungile. Umbuzo owodwa nje wokugcina ngqo embuzweni wobumbano lwe-NATO. Ungqongqoshe wezangaphandle wase-Ukraine uphinde wathi iJalimane ibukela phansi ubumbano ku-Alliance, ngokwengxenye ngenxa yokuthi ivimba i-Estonia ekudluliseleni izikhali, ngeke inikeze izikhali ngokwayo, ukuphawula kwenduna yabo yezempi ngempelasonto - noma ngesonto eledlule. Ingabe unayo impendulo kulokho, lo mbono wokuthi iJalimane ayenzi okwanele ngaphakathi kwe-Alliance ukuze isekele uhlangothi oluhlangene?
MR PRICE: UNobhala ube nethuba lokuhlangana hhayi noChancellor Scholz kuphela kodwa noNgqongqoshe Wezangaphandle u-Baerbock ngesonto eledlule eBerlin, futhi ungqongqoshe wezangaphandle wabuzwa ngempela lo mbuzo emi eduze kukaNobhala. Futhi ukhulume kahle ngalokho iJalimane ekwenzayo, amagalelo abalulekile iJalimane ewenza e-Ukraine. Ngizoyishiya eJalimane ngikhulume nalawo magalelo abalulekile. Kodwa ukuze kucace, akukho ukukhanya kwasemini phakathi kwabalingani bethu nabalingani bethu mayelana nemiphumela engathi sína engase yehlele i-Russian Federation uma iqhubekela phambili.
UMBUZO: Ngabe ukukhuphuka kungabukeka kanjani?
UMBUZO: Into eyodwa kuphela e-Ukraine, into eyodwa yokugcina e-Ukraine.
UMBUZO: Ngabe ukwehla kwenyuka - kuzobukeka kanjani ukwehla? Ngisho ukuthi banawo - manje, kuthiwa banamasosha ayi-100,000 endaweni yabo emngceleni. Ngakho-ke ukwehla kungabukeka sengathi mhlawumbe uma behoxisa amasosha angama-25,000? Ngiqonde ukuthi, ukwehla kwezinga kungabukeka kanjani?
MR PRICE: Kungase kuhlanganise lokho. Angizukuba ngumyalelo.
UMBUZO: Ingabe kukhona, njengokungathi, isibalo ongathanda ukusibona?
MR PRICE: Bheka, angizukuba ngumyalelo ngalokho. Ngicabanga ukuthi ukwehlisa izinga kungase kuthathe izindlela eziningi. Kungathatha uhlobo lwalokho esikubonayo nesikubonile emingceleni yase-Ukraine. Kungathatha uhlobo lwalokho esikubonayo mayelana nomsebenzi waseRussia kulokho okufanele kube elinye izwe elizimele, iBelarus. Kungase kuthathe isimo salokho esikuzwa ku-Russian Federation. Ukwehla kwezinga eliphezulu kungase kuthathe izindlela eziningi.
Kungathatha izinhlobo eziningi njengesinyathelo sokuqala, futhi yilokho esingathanda ukukubona ngenhloso yokugcina engqondweni yokubona amabutho aseRussia ebuyela ezindlini zawo ezihlala unomphela, ukuze ayeke lokhu futhi aqede futhi ahlehlise lesi sakhiwo ngasemingceleni yase-Ukraine, ukuyeka ngamazwi anolaka. Ukwehla kwezinga eliphezulu kungase kuthathe izindlela eziningi. Singakwamukela noma yikuphi kwakho.
UMBUZO: Ngakho-ke kuphela - kuphela uma amabutho aseRussia ebuyela ezindlini zawo zamasosha ngaso sonke isikhathi kuyoba - kuzobhekwa njengokwehliswa?
MR PRICE: Cha. Iphuzu lami ukuthi ziningi izindlela ukwehlisa izinga elingathatha. Kukhona futhi ukuqhubeka. Singakwamukela, okungenani njengesinyathelo sokuqala, noma yiluphi uhlobo lokwehlisa izinga.
UMBUZO: Yebo, uyawazi umhlangano ozoba seParis ngoLwesithathu phakathi kwezikhulu zase-Ukraine naseRussia, futhi ingabe ulindele noma iyiphi impumelelo?
MR PRICE: Yebo, ngakho-ke angilindele noma yikuphi ukuzibandakanya kwaseMelika kulokho. Asibone. Njengoba nazi, sixoxisana namadlelandawonye nozakwethu, okuhlanganisa ne-Ukraine, ukuze sinqume izinyathelo ezilandelayo, futhi sixhumana ne-Russian Federation futhi, njengoba sishilo. Siyakholwa ukuthi idiplomacy iyindlela engcono kakhulu eya phambili, futhi sizimisele ukusekela inkhulumomphendvulwano kanye nokuxoxisana okuzosiza ekudambiseni ukungezwani. Ngakho siyayisekela leyo mizamo eyenziwa ohlangothini lweRussian Federation ngokwethembeka.
UMBUZO: Uke wawabona ama-tweets kazakwenu wase-Ukraine, umkhulumeli? Ubhale kuTwitter sisesithangamini. Ngizofunda ngokukhulu ukushesha: “Kunamanxusa ayi-129 e-Ukraine. Kulaba, abane kuphela abamemezele ukuhamba kwamalungu omndeni wabasebenzi: i-US, UK, Australia kanye neJalimane. Abanye, okuhlanganisa i-EU, i-OSCE, i-COE, i-NATO, ne-UN, abakaze baveze inhloso yabo yokulandela lezi zinyathelo ngaphambi kwesikhathi.” Ingabe unayo impendulo kulokho?
MR PRICE: Angazi.
UMBUZO: Sizwa ukuthi ba-
MR PRICE: Anginayo impendulo kulokho. Ukuphawula kwami ​​kuphela kuzoba yilokho oke wangizwa ngikusho ngaphambili. Lokhu kusekelwe kumbandela owodwa nakumbandela owodwa wodwa. Kuyinto ehamba phambili esiyinamathisela ekuphepheni nasekuvikelekeni kozakwethu base-Ukraine.
UMBUZO: Kulungile. Nginombuzo wase-Iran - ngiyaxolisa.
MR PRICE: Noma yini enye eRussia-Ukraine? Yebo.
UMBUZO: Nginokulandelela mayelana nokuphuma. Ngivela kwabezindaba base-Ukraine -
MR PRICE: Ah, wamukelekile.
UMBUZO: - futhi ngifuna ukukucacisa ukuthi i-United States ayizange ikhiphe osomaqhinga ngisho nangosuku olubi kakhulu kule minyaka eyisishiyagalombili edlule. Futhi i-Kyiv ikude ngokwanele nomngcele waseRussia. Ingabe kusho ukuthi kusukela olwazini lwakho nasekuhlakanipheni kwakho, inhloko-dolobha yethu - inhloko-dolobha yase-Ukraine iqondiswe futhi iyinhloso eyinhloko yokuhlasela kweRussia?
MR PRICE: Hhayi-ke, bheka-ke, angizukukhuluma nanoma yimuphi uphiko lwezobunhloli, kodwa njengoba sesishilo, kuhlanganise nesimemezelo sethu izolo ebusuku, lokhu sikwenza njengesinyathelo esihlakaniphile ngenxa yemizamo eqhubekayo yaseRussia yokususa uzinzo ezweni. kanye nokubukela phansi ukuphepha kwezakhamizi zase-Ukraine nabanye abavakashela noma abahlala e-Ukraine.
UMBUZO: Futhi izikhulu zase-United States zisho kaningi - kanjalo nawe - ukuthi awuyeki imizamo yokusebenzelana neRussia. Ngicela ukucacisa? Usushilo kakade mayelana nezokuphepha - ukuphepha okuhlangene. Uqonde ukuthini ngempela? Ikuphi indawo yokuxoxisana neRussia? Futhi siyini isihloko sokuyekethisa?
MR PRICE: Ngakho-ke siye sasho ngokungaguquki ukuthi sizimisele ukubandakanya inkhulumomphendvulwano kanye ne-diplomacy, futhi siye sahlanganyela engxoxweni kanye ne-diplomacy ne-Russian Federation sazi ukuthi amaRussia ashicilele izivumelwano zawo ezimbili. Kunezinto ezithile kulezo zivumelwano, njengoba usizwile sisho kaningi, ezingaqali, okuhlanganisa nenqubomgomo ye-NATO ebizwa ngokuthi “Open Door”.
Kodwa kunezinye izindawo lapho - lapho inkhulumomphendvulwano nediplomacy kungasiza ukuthuthukisa ukuphepha kwethu okuhlangene, ukuphepha kwe-transatlantic. Ngingabeka iphuzu lokuthi nangaphambi kokuba lokhu kwakhiwa kwamasosha aseRussia emingceleni yase-Ukraine kuqale, besesivele sesenze izimbizo ezimbili ze-Strategic Stability Dialogue, indawo iPhini likaNobhala u-Sherman ayisebenzise ngelinye isonto ukuhlangana nozakwabo waseRussia ukuze kuxoxwe ngezinye zalezi. izindaba. Futhi iqiniso lokuthi i-SSD ebizwa ngokuthi iqale ngemuva kwengqungquthela phakathi kukaMongameli uPutin noMongameli uBiden ngoJuni ikhuluma neqiniso lokuthi sikholelwa ukuthi kunezinkinga uma kuziwa ekulawuleni izikhali, ngokwesibonelo, lapho singaba khona nezingxoxo eziphumelelayo ama-Russian angabhekana nezinkinga zethu zokuphepha, okusho ukuthi lawo ase-United States kanye nabalingani bethu nozakwethu, futhi angase aphendule kwezinye izinkathazo ezishiwo abaseRussia. Ngakho-ke sikhulume ngokuqondile nokubekwa kwemicibisholo e-Europe, izinketho zezikhali zenuzi zamasu nezingezona zamasu, ezinye izindlela zokulawula izikhali, kanye nalezo eziklanyelwe ukukhulisa ukubonakala nokuzinza.
Iphuzu elibalulekile kulokho ukuthi noma yiziphi izinyathelo esingazithatha ngeke zibe yizivumelwano. Kuzodingeka bahambisane, okusho ukuthi abaseRussia kuzodingeka benze okuthile okuzosiza ukuthuthukisa ukuphepha kwethu - ukuma kwethu kwezokuphepha.
Iphuzu lokugcina kulokhu: Konke lokhu bekulokhu futhi kusazoqhubeka kwenziwa ngokubonisana okuphelele nokugcwele nabalingani bethu kanye nozakwethu, futhi lokho kubandakanya i-Ukraine. Ngenkathi uNobhala ehlangana noMongameli uZelenskyy, lapho ehlangana noMongameli Kuleba - noma uNgqongqoshe Wezangaphandle kuleba, lapho ekhuluma noNgqongqoshe Wezangaphandle kuleba ngoLwesihlanu ngemuva kokuhlangana noNgqongqoshe Wezangaphandle uLavrov, sisenkambisweni yokubeka obala ngokugcwele nabalingani bethu base-Ukraine mayelana izindaba okuxoxwa ngazo kanye nenqubekelaphambili yalezo zingxoxo.
UMBUZO: (Ayizwakali) odabeni lwasePalestine?
MR PRICE: Noma yini enye eRussia-Ukraine? UBen, omunye -
UMBUZO: Yebo. UNobhala wayezophakamisa uPaul Whelan noTrevor Reed ezingxoxweni zakhe noNgqongqoshe Wezangaphandle uLavrov. Ingabe sikhona isibuyekezo? Ingabe ucabanga ukuthi isimo esikhona manje sizosenza sibe ngcono noma sibe sibi kakhulu esimweni sabo?
MR PRICE: Lokho kuncike kakhulu eRussian Federation. Ngingaqinisekisa, njengoba uNobhala esho ngaphambi komhlangano, ukuthi wawaphakamisa amacala kaPaul Whelan noTrevor Reed, bobabili abavakashela eRussia njengezivakashi futhi asebebanjwe ngokungafanele isikhathi eside kakhulu, walibeka iphuzu lokuthi kudala ukuthi bababone bebuyela emindenini yabo bephephile. Futhi sizoqhubeka nokusebenza kulokho.
UMBUZO: Ngiyabonga, Ned. Enye futhi ngenhlekelele yaseRussia-Ukraine. Ngabe abaphathi beBiden bayakubona noma bayavuma ukuthi noma yikuphi ukungena noma ukuhlasela kweRussia ngokumelene ne-Ukraine kungadala umphumela we-dominos ezindabeni eziningi kangaka? Ngizobala izibonelo ezithile: I-China ngokumelene ne-Taiwan; I-Iran nama-proxies ayo; I-North Korea kanye nemicibisholo yayo ye-ballistic ngokumelene ne-South Korea ne-Japan; I-Venezuela, iCuba, kanye namaqhinga abo okucindezela okugunyazwe kanye neminyakazo.
Ngakho-ke uNed, umhlaba wonke ubheke ukuthi i-US izokwenzani ukumisa iRussia. Uphawula kanjani ngalokhu?
MR PRICE: Yayiyini ingxenye yokugcina? Senzenjani?
UMBUZO: Uphawula kanjani ngalokhu? Ngabe abaphathi beBiden bayazi ukuthi umhlaba wonke ubukele kangakanani? Njengoba kwenzeka e-Afghanistan, bese kuthi eminye imibiko ithi iRussia ithatha ikhasi lalokho okwenzeka e-Afghanistan futhi ihlasela i-Ukraine - noma inganyakaza - ngakho-ke uma yenze lokho, konke lokhu mphumela we-dominos ungenzeka.
MR PRICE: Nokho, ngaphambi kokuba ngifike embuzweni wakho obanzi, ngifuna ukukhuluma nengxenye yokugcina yombuzo wakho, leyo yi-Afghanistan.
Nginobunzima bokuqonda ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuqedwe ukuzibophezela kwezempi kweminyaka engama-20 lapho iMelika ichitha izigidigidi nezigidigidi zamaRandi minyaka yonke, lapho izinkulungwane zamasosha aseMelika - ngesinye isikhathi amashumi ezinkulungwane zamasosha aseMelika - kumisiwe; lapho kwakukhona ukuzibophezela kwe-NATO, lapho izinkulungwane zamasosha e-NATO zazimi iminyaka eminingi, zithatha abalimele, zibekezelela ukulahlekelwa ukuphila ngokuzibophezela kwezempi okuvulekile - sasinjani - ngabe kwakusenjalo, sizoba kanjani sibekwe kangcono ukuze sithathe esikubona manje esivela eRussian Federation.
UMongameli wacaca ngesikhathi enza isimemezelo sakhe sokuthi sizoqeda ukusebenzelana kwethu kwezempi e-Afghanistan, ukuthi ingxenye yesizathu esenza lokhu kwakungekona nje ukuvimbela esinye isizukulwane samalungu enkonzo yaseMelika noma amalungu e-NATO ekulweni. futhi okungenzeka sifele e-Afghanistan, kodwa ukusivumela ukuthi sigxile ezinsongweni kanye namathuba ekhulunyaka lama-21. Futhi ngakho-ke njengoba sithatha lolu dlame lwaseRussia, njengoba sifuna ukuzibandakanya kule ndlela yokuzivikela kanye nokuvimbela, yilokho kanye esikwenzayo.
Ngakho-ke bengifuna ukukhuluma ngephuzu nge-Afghanistan.
UMBUZO: Kodwa Ned, ngicabanga ukuthi iphuzu liwukuthi abaphathi (abangezwakali) bafulathela ababambisene nabo lapho, abantu abaningi babona kanjalo; mhlawumbe abalingani bakhathazekile ngokuthi lokho kungenzeka manje.
MR PRICE: Okokuqala nje, i-United States ayizange iyifulathele i-Afghanistan. Usibonile sihlala sibambisene futhi sibonisa ukuzibophezela kwethu okuqhubekayo kubantu base-Afghanistan, futhi sikwenze lokho ngezindlela eziningi. Akumele ngidlule kuzo manje ngoba lokhu sikubuka njalo.
Ngakho-ke noma ngubani othatha noma yisiphi isifundo ngaphandle kweqiniso lokuthi i-United States yabona sekuyisikhathi sokuqeda lokho obekuzibophezela kwezempi okuvulekile lapho izinkulungwane zezinkulungwane zamasosha aseMelika zilwe futhi izinkulungwane zifile, futhi okufanayo. ku-NATO futhi, yaphuca i-United States kanye nozakwethu be-NATO izigidi ngezigidigidi - izigidigidi phakathi neminyaka engama-20; noma ngubani ongathatha isifundo kulokho ngaphandle kokuthi i-United States izibeka esimweni sokuthatha izinsongo namathuba esibhekene nawo manje, ngenkathi siqhubeka nokubambisana futhi sisekela abantu base-Afghanistan, lokho kungaba ukuhlaziya okuyiphutha.
Kodwa embuzweni wakho, sikucabangile lokho. Futhi yingakho nje uNobhala ethule inkulumo eBerlin ngesonto eledlule eyayikulo mbuzo, ukubeka iphuzu lokuthi esikubonayo iRussia izama futhi ikwenza ngokumelene ne-Ukraine ibalulekile ngokwayo, kunjalo. I-Ukraine ingumlingani oseduze; sinabangane abaseduze kubantu base-Ukraine. Kodwa ngandlela thize, lokhu kubaluleke njenge-Ukraine, kukhulu nakakhulu kunombuzo wokungqubuzana, ukungqubuzana okukhiqizwa eRussia, phakathi kweRussia ne-Ukraine. Lokhu kumayelana nalokho okufanele kube yimithetho engenakuvinjelwa yalokho okubizwa ngokuthi i-oda lamazwe ngamazwe elisekelwe emithethweni, okufanele kube yimithetho engenakuvinjelwa ukuthi eminyakeni engama-70 edlule, kusukela ekupheleni kweMpi Yezwe II, ivikele futhi yavumela ngempela amazinga okuphepha angakaze abonwe. , lokuzinza, lokuchuma. Lokho kufaka phakathi - eYurophu, kodwa kuhlanganisa nasezindaweni ezingaphezu kwalokho.
Futhi-ke, uyasizwa sikhuluma ngokuhleleka kwamazwe ngamazwe okusekelwe emithethweni hhayi kuphela endabeni yase-Europe nokuthi iRussia yenzani ukuyibukela phansi, kodwa nakwezinye izifunda, ikakhulukazi i-Indo-Pacific, lapho sinokukhathazeka okufanayo mayelana nalokho. amazwe athile nawo azame ukwenza ukubukela phansi, ukucekela phansi lokho kuhleleka kwamazwe ngamazwe okusekelwe emithethweni. Ngakho-ke akulahleki kithi ukuthi amaRussia nemithelela yalokho abakwenzayo, njengoba kubaluleke kakhulu e-Ukraine, kudlulele ngale kwe-Ukraine.
UMBUZO: Ned, nginemibuzo emibili nge-Iran ne-Kuwait.
UMBUZO: Ned, bengicela ukubuza -
MR PRICE: Impela, ngizobuyela kuwe. Kusho.
UMBUZO: Wangibiza kathathu noma kabili.
MR PRICE: Uthe, usuvele ubuze -
UMBUZO: Kulungile. Cha, ngiyaqonda.
MR PRICE: Usuvele ubuze umbuzo phakathi nalokhu kwaziswa.
UMBUZO: Ngiyaqonda. Ngifuna ukushintsha izihloko, nokho. Ngifuna ukukubuza ngomuntu wasePalestine-waseMelika owafela esitokisini sakwa-Israel mhla ziyi-12 kuMasingana. Manje, ngiyazi ukuthi ubize ama-Israyeli ukuthi ubufuna ukubona ukuthi bekuyini izimo nokunye. Okokuqala nje, ingabe basabela kuwe? Ngisho ukuthi kungaba yinoma yimuphi omunye wabafowethu.
MR PRICE: Uxolo, bekuyini ingxenye yokugcina?
UMBUZO: Ngisho, lokho kungaba - akunandaba. Ngikhuluma nje bakuphendule?
MR PRICE: Ngakho-ke asikakawuboni umbiko wokugcina ovela kuHulumeni wakwa-Israel. Siyaqhubeka nokweseka uphenyo olunzulu ngezimo zesigameko. Siyakwamukela ukuthola ulwazi olwengeziwe oluvela kuHulumeni wakwa-Israel ngokushesha ngangokunokwenzeka. Sikhathazeke kakhulu ngemibiko yabezindaba mayelana nezimo zokushona kukaMnu. Njengoba sike sasho phambilini, besisondelene nomndeni wakhe ukuze sidlulise amazwi enduduzo, ukuze sinikeze izinsiza zamanxusa. Sasimelwe ngesikhathi sikaMnu. Assad futhi.
UMBUZO: Hhayi-ke washona eboshwe ozankosi eboshwe nemilomo nokunye. Futhi hlobo luni - benza - ingabe ubanika umkhawulo wesikhathi? Uyawethemba ama-Israyeli ukuthi azokwenza uphenyo lwawo kuleli cala?
MR PRICE: Njengoba ngishilo, Wathi, siyakwamukela ukuthola lolo lwazi ngokushesha okukhulu.
UMBUZO: Kulungile. Nginomunye umbuzo osheshayo. Kunemibiko yokuthi kunezintatheli zasePalestine ezingu-17 eziboshiwe namuhla. Ingabe leyo yinto ongayiphakamisa nama-Israel ukuze ubheke ukuthi yiziphi izimo zokuboshwa kwabo?
MR PRICE: Siyayazi imibiko oyisho. Njengoba senza emhlabeni wonke, sisekela izintatheli ezizimele nezinhlangano zabezindaba, futhi uke wasizwa sikhuluma ngaphambili ngokubaluleka kokubika kwazo, ikakhulukazi ezindaweni lapho ukungezwani kuphezulu noma ukungqubuzana kungase kuqubuke. Sikholelwa ukuthi ukuhlonipha amalungelo abantu, inkululeko eyisisekelo, kanye nomphakathi onamandla kubaluleke kakhulu ekubuseni okunesibopho nokuphendula.
UMBUZO: Ekugcineni, iNxusa laseMelika kuNhlangano Yezizwe ngesonto eledlule lakhuluma futhi lagqamisa udlame lwabahlali kanye nodlame olubhekiswe kwabasePalestine. Nokho sibone ukwanda kodlame kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule. Ingabe leyo yinto ongayiphakamisa noma umatasatasa kakhulu nezindaba ezifana ne-Ukraine ne-Iran nazo zonke lezi zinto - ngisho, ngokuqondakalayo?
MR PRICE: Wathi, singuhulumeni omkhulu. Singumnyango omkhulu. Hhayi ukusebenzisa isingathekiso esisetshenziswe ngokweqile, kodwa singahamba futhi sihlafune ushingamu kanyekanye. Uma kukhulunywa ngodaba oluphakamisile, uzwile ukuthi sikhuluma ngalolu daba. Ucaphune ukuphawula kwakho kamuva nje. UMnyango WezoMbuso uke waphawula ngalokhu ngaphambilini. Sikholelwa ukuthi kubalulekile ukuthi zonke izinhlangothi zigweme izinyathelo ezibhebhethekisa ukungezwani futhi zinciphise imizamo yokuqhubekisela phambili isixazululo semibuso emibili okuxoxiswene ngaso. Lokhu kuhlanganisa udlame olubhekiswe kubantu kanye nodlame lwabahlali.
UMBUZO: Ned, ngingabuza okuthile nge-Iran (engezwakali)?
MR PRICE: Ngakho-ke imibuzo emibili yase-Iran. Impela.
UMBUZO: Yebo. Ungqongqoshe wezangaphandle e-Iran ngoMsombuluko uthe sebekulungele ukubheka izingxoxo eziqondile ne-United States uma kwenzeka - uma benomuzwa wokuthi bangathola isivumelwano esihle neziqinisekiso. Noma ngabe yikuphi, ngabe kukhona ukuxhumana kulokhu? Futhi ingabe nicabanga ukuba nezingxoxo eziqondile nabo?
MR PRICE: U-Humeyra, njengoba wazi, sikulungele ukuhlangana ngokuqondile. Besilokhu sibambe isikhundla sokuthi kungakhiqiza kakhulu ukusebenzelana ne-Iran ngqo kuzo zombili izingxoxo ze-JCPOA nakwezinye izindaba. Lokhu kudlulela kumafomethi ezinhlangothi zombili kanye nakuma-multilateral. Ukuhlangana ngokuqondile kuzokwenza ukuthi kube nokuxhumana okusebenza kahle kakhudlwana, okudingeka ngokushesha ukuze kufinyelelwe ukuqondana mayelana nokubuyiselana ekuhambisaneni ne-JCPOA.
Senze leli phuzu phambilini, kepha uma kubhekwa ijubane lokuthuthuka kwe-Iran yenuzi, isikhathi sifushane kakhulu kuze kube izinzuzo zokungezwani ezidluliselwe yi-JCPOA njengoba zabhalwa ekuqaleni futhi zaqaliswa - ezahlelwa ngo-2015 futhi zaqaliswa ngo-2016 zidlula intuthuko yenuzi. eyenziwe yi-Iran. Ngakho-ke sifuna ukwenza le diplomacy ngokuphuthumayo, futhi besilokhu sicaca ngokungaguquki ukuthi ukwazi ukusebenzelana ngokuqondile kuzofeza lezo zinhloso.
UMBUZO: Uma ubheka isikhundla sakho njengamanje kanye nabakusho, kufanele silindele ukuthi lokhu kwenzeke maduze? Ingabe sikhona isizathu esenza lokhu kwenzeke maduze? Ingabe kube khona ukuxhumana okungaqondile mayelana nokwenza lokhu kwenzeke maduze?
MR PRICE: Kuzodingeka ubuze izikhulu eTehran. Thina – akuqali ukuthi siveze leli phuzu. Senze leli phuzu ngokungaguquki kuze kube manje. Ama-Irani aphikelele kufomethi engaqondile eVienna. Kade saphawula ukuthi izingxoxo ezingaqondile, ikakhulukazi odabeni lwalobu bunzima futhi obubaluleke kangaka, ziyisithiyo. Ngakho ukuma kwethu bekucacile. Ngingakuqondisa kuziphathimandla zase-Iran.
UMBUZO: Into yami yokugcina kulokhu. Sibe nengxoxo noSpecial Envoy Malley izolo, othe kuzoba nzima ukucabanga ukuthi i-US yenze isivumelwano ne-Iran ngaphandle kokuthi kukhululwe abathunjwa baseMelika. Ngifuna ukukuphusha kancane ukuthi kungani abaphathi bengazimisele ukusho ngokuqondile ukuthi ngeke baphinde bajoyine i-JCPOA ngaphandle uma izakhamizi zaseMelika zikhululwa.
MR PRICE: Nokho, okushiwo yiSithunywa Esikhethekile ukuthi, sicaphuna, "kunzima kakhulu ngathi ukuthi sicabange ukubuyela esivumelwaneni senuzi ngenkathi abantu baseMelika abane abangenacala bebanjwe yi-Iran."
MR PRICE: Leli yiphuzu alenze ngokuphindaphindiwe ngaphambili, ngakho-ke lokhu - akufanele kube yizindaba. Futhi, ngingakutshela, akuzona izindaba kubantu base-Irani. Bake bezwa lesi sikhundla ngokungaqondile kithi ngaphambili.
Kodwa Isithunywa Esikhethekile siphinde saveza iphuzu lokuthi lezi zinkinga zisebenza kumathrekhi ahlukene, futhi zisebenza kumathrekhi ahlukene ngesizathu esilula: Ukubuyiselana ekuhambisaneni ne-JCPOA kuyisiphakamiso esingaqinisekile. Sifuna ukubona laba bantu baseMelika ababoshelwe iminyaka ilandelana bengafuni, bekude nemindeni yabo, bebuya ngokushesha okukhulu. Ngeke kufeze izinhloso zethu, ngeke kufeze izithakazelo zabo, ukubophela isiphetho sabo esihlokweni engasho ngaphambili esingaqinisekile ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke yingakho ngokuqinisekile kunemibala ukusebenzisana kwethu, kodwa lokhu kusebenza kumathrekhi ahlukene.
UMBUZO: Ngingabuza umbuzo?
UMBUZO: Kodwa Ned, indlela osho ngayo, kubukeka - kufana kakhulu nesimiso.
MR PRICE: Futhi, akukhona ukuthi kukhona ukuxhumana okuqondile noma okusobala ngoba ukubuyisela okufanayo ekuhambisaneni ne-JCPOA kuyisiphakamiso esingaqinisekile. Sifuna ukubuya kwalaba baseMelika kube isiphakamiso esithile, ngakho-ke sibeka lezi zindaba ngokwehlukana.
UMBUZO: Ungqongqoshe wezangaphandle waseKuwait uvakashele eBeirut ngoMgqibelo futhi wethula iziphakamiso zokwakha ukuzethemba eLebanon kanye nomyalezo ohlanganiswe nezifunda zaseGulf, futhi uvakashele eWashington kuleli sonto. Uyazazi iziphakamiso? Futhi ingabe kukhona ukuxhumana phakathi kokuvakasha kwakhe eBeirut naseWashington?
MR PRICE: Hhayi-ke, ngilindele ukuthi uma uNobhala ehlangana nozakwabo waseKuwait ngoLwesithathu ukuthi bazothola ithuba lokuxoxa ngeLebanon. Kuyinto i-United States, kanye nozakwethu - okuhlanganisa nozakwethu base-Gulf, French, nabanye - esigxile kakhulu kuyo. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi sizoba nokunye esingakusho ngemuva komhlangano wamazwe amabili ngoLwesithathu.
UMBUZO: (Ayizwakali) esizakwethu uTracy Wilkinson eHonduras. Izinhlangothi ezibangayo engqungqutheleni yayo zingase ziphazamise ukugcotshwa kwangoLwesine kukamengameli omusha, uMnyango Wezwe oshesha ukumemukela. IPhini likaMengameli uHarris uhlelelwe ukuthi ahambele umcimbi wokugcotshwa. Ingabe i-US yenza okuthile ukudambisa leyo nkinga?
MR PRICE: Nokho, engizokusho ukuthi ukukhethwa kobuholi obusha besikhashana eHonduran National Congress kuyisinqumo esizimele saseHonduras. Sibheke ngabomvu ukujulisa umsebenzi wethu kanye nabaphathi be-Castro abangenayo kanye nabaseHonduran abavela kuyo yonke imikhakha yezombangazwe ukuze siqhubekisele phambili izintshisekelo zethu ezifanayo. Sicela abalingisi bezepolitiki behlise umoya, babambe izingxoxo, bagweme udlame nezinkulumo ezivusa inkanuko, futhi sinxusa abalandeli babo ukuthi baveze imizwa yabo ngokuthula bebe behlonipha umthetho.
Njengoba nazi, iPhini likaMongameli u-Harris usevele waba nethuba lokuxhumana noMongameli okhethiwe u-Castro ukuze ahalalisele ngokunqoba kwakhe okungokomlando njengomongameli wesifazane wokuqala waseHonduras. Kuleyo ngxoxo ngenyanga edlule baxoxisane ngentshisekelo yabo efanayo yokusebenza ndawonye ukuze kubhekwane nezimbangela zokufuduka kwabantu, ukukhuthaza ithuba lezomnotho elibandakanya abantu baseHonduras, ukwenza ngcono - ukulwa nenkohlakalo, ukunciphisa izinsongo zokuphepha, kanye nokwenza ngcono ukufinyelela kwezempilo. kanye nemfundo.
UMBUZO: One on Turkey kozakwethu kuVOA.
MR PRICE: Impela. Ingabe unayo - ingabe kube khona ukulandelela, Conor?
UMBUZO: Cha, omunye umbuzo, ngakho qhubeka, uBarbara.
UMBUZO: Ngakho-ke uma unganaki, i - engisebenza naye ku-VOA uzibuze ukuthi ngabe kukhona yini ukusabela okuvela kuMnyango Wezwe mayelana namacala amabili mayelana nemikhawulo yenkululeko yokukhuluma eTurkey. Omunye ungoMgqibelo odlule: intatheli yaseTurkey eyaziwa kakhulu iboshiwe ngokuhlambalaza uMongameli u-Erdogan. Namuhla i-ejensi yombuso - umbuso uhlawulise isiteshi sikamabonakude asisebenzelayo. Icala lesibili elomculi odumile othola izinsongo zama-Islamist namaqembu esizwe ngento ayibhala esikhathini esidlule, futhi uMongameli u-Erdogan wasabisa ngokumthulisa emithandazweni yangoLwesihlanu, ethi, ecaphuna, "Kungumsebenzi wethu ukusika lezo zilimi," un-quote.
Ingabe uyasabela kulawa macala?
MR PRICE: Nokho, lokhu kuyasebenza eTurkey kodwa kusebenza emhlabeni wonke nasekusetshenzisweni kwayo, futhi lelo iqiniso lokuthi sikholelwa ukuthi inkululeko yokukhuluma iqinisa intando yeningi futhi idinga ukuvikelwa ngisho nalapho ihilela inkulumo abanye bangathola impikiswano noma abanye bangase bangakhululeki. Siyakuqaphela futhi siphoxekile ukunakwa kanye nokuboshwa kuka-Sedef Kabaş, elinye lamacala owashilo, futhi leyo migomo isebenza ngokulinganayo eTurkey njengoba yenza kunoma yiliphi elinye izwe.
UMBUZO: Burkina Faso. Amasosha athathele ku-TV ukuze amemezele ukuthi aphethe. Ihhovisi likamengameli likuchithile lokho, kodwa umengameli akakabonwa. Ingabe uyazi ngokwenzekayo? Ingabe kukhona ukuketula umbuso? Usuqalile ukuhlola ukuthi ikhona noma cha?
MR PRICE: Hhayi-ke, siyayazi imibiko yokuthi umongameli waseBurkina Faso uboshwe amalungu ebutho lezwe. Ithimba lenxusa lethu e-Ouagadougou liqaphe isimo futhi ligcina ukuxhumana nabalingani bamazwe ngamazwe kanye nezikhulu zikahulumeni kaMongameli Kaboré. Sicela ukuba akhululwe ngokushesha uMongameli Kaboré nezinye izikhulu zikahulumeni, futhi amalungu ombutho wezokuvikela ahloniphe umthethosisekelo waseBurkina Faso kanye nobuholi bomphakathi. Sinxusa zonke izinhlangothi kulesi simo esiwuketshezi ukuthi zehlise umoya futhi zifune ukuxoxisana njengendlela yokuxazulula izikhalo. Thina - inxusa lethu e-Ouagadougou seluleke izakhamuzi zase-US e-Burkina Faso ukuthi iziphathimandla zendawo sezifake umthetho oyisibopho wokubuya ekhaya futhi izakhamuzi zase-US ziyelulekwa ukuthi ziphephe, zigweme izixuku ezinkulu, futhi zigade abezindaba zendawo ukuze bathole izibuyekezo.
UMBUZO: I-US inikeza inani elibalulekile losizo eBurkina Faso. Ingabe wenza ukuhlolwa kokuketula umbuso?
MR PRICE: Ngakho lesi yisimo esiguqukayo. Yisimo esihlala simanzi. Iqhubekile nokuthuthuka ngisho naphakathi namahora akamuva, ngakho-ke sekuseduze kakhulu ukuthi iveze, okungenani ngokusemthethweni kithi, uhlobo lwentuthuko eqhubekayo. Sicele ukuzithiba kwabo bonke abalingisi njengoba sibuyekeza ngokucophelela izehlakalo ezikhona mayelana nanoma yimuphi umthelela ongaba khona osizweni lwethu.
UMBUZO: Iran, ukulandelela okusheshayo kakhulu. I-AFP isanda kubika ukuthi - kuthiwa izikhulu eziphezulu zaseMelika zithi zingathanda ukubona izingxoxo eziqondile ne-Iran. Ungakuqinisekisa lokho? Ngabe ufuna izingxoxo eziqondile ne-Iran ku- -
MR PRICE: Ngicabange ukuthi sisanda kuxoxa ngalokhu imizuzu emihlanu noHumeyra.
MR PRICE: Yebo. Senza njalo.
UMBUZO: Kumelwe ngiphuthelwe. Kulungile, uxolo.
MR PRICE: Yebo. Yebo.
UMBUZO: Ngakho-ke yini okuthenjwa ukuthi izozuzwa ngezingxoxo eziqondile esikhundleni salokho okwenzeka eVienna manje?
MR PRICE: Hhayi-ke, sibe nokuxoxisana okude kulokhu, ngakho-ke ngizokubhekisa kulokho.
Imibuzo embalwa yokugcina. Yebo, ngicela? Yebo?
UMBUZO: Ingabe sikhona isibuyekezo ongasinikeza ngokugqekezwa kwejele le-ISIS enyakatho yeSyria, noma ngokwemibandela yokusekelwa komfelandawonye kanye nenani labaphunyukayo? Bese kuthi-ke yini ngempela - ithini ngekhono le-SDF lokuvikela izinsiza, futhi ubona lokhu njengokwehluleka kwezobunhloli ngasohlangothini lomfelandawonye?
MR PRICE: Hhayi-ke, njengoba mhlawumbe ubonile, sikhiphe isitatimende ngale mpelasonto, futhi sikugxekile ukuhlasela kwe-ISIS ngesonto eledlule esikhungweni sokuboshwa saseHasakah enyakatho-mpumalanga yeSyria, esiqonda ukuthi bekuwumzamo wokukhulula abalwa be-ISIS ababoshiwe. Sincoma i-SDF ngokusabela kwayo ngokushesha nokuzibophezela okuqhubekayo ekulweni ne-ISIS, futhi lokhu kuhlasela emiqondweni yethu kugqamisa ukubaluleka kanye nesidingo sokuxhasa ngokugcwele imizamo ye-Global Coalition Yokunqoba i-ISIS yokuthuthukisa nokuvikela ukuboshwa kobuntu kwamasosha e-ISIS, okuhlanganisa nokuqinisa ukuphepha kwezikhungo zokuboshwa.
Kithina futhi kugcizelela isidingo esiphuthumayo sokuthi amazwe adabuka kuwo abuyisele ezweni lawo, avuselele, ahlanganise kabusha, futhi ashushise - lapho kufanele khona - abantu bakubo ababoshwe enyakatho-mpumalanga yeSyria. Sizibophezele ekunqobeni okungapheli kwe-ISIS emhlabeni jikelele, sisebenzisana, nomfelandawonye kanye nozakwethu basekhaya. Kepha ngale kwalokho, ngentuthuko yamaqhinga phansi, ngidinga ukukubhekisa ku-DOD.
UMBUZO: Izolo ebusuku, uMnyango Wezwe uthe uma kuhlasela i-Ukraine, i-US ngeke ikwazi ukukhipha izakhamizi zayo. Ngazibuza ukuthi ungachaza ukuthi kungani, kungani lokho kungaba njalo.
MR PRICE: Ben, lokhu - lokhu bekulokhu kunjalo ngokomlando. Inkokhelo yethu eyinhloko iwukuhlinzeka ngezibuyekezo nentuthuko kanye nokuqinisekisa ukuxhumana nomphakathi wangasese wezakhamuzi zaseMelika kunoma yiliphi izwe, okuhlanganisa nalapho senza okuthile njengokuhamba oku-oda noma ukuhamba okugunyaziwe. Ngiyazi ukuthi isipiliyoni sakamuva sase-Afghanistan singafaka umbala kumqondo abanye abantu abanawo ngalokhu, kepha i-Afghanistan, ngezizathu esizazi kahle sonke, yayihlukile. Kwakuyinto uHulumeni wase-United States ayengakaze ayenze ngaphambili.
Futhi njengoba usizwile sisho kumongo we-Ethiopia, Ukraine, nakwamanye amazwe, icala lethu ukuqhubeka nokuhlinzeka ngezibuyekezo zolwazi kumphakathi wezakhamizi zaseMelika, ukubahlinzeka ngezinsizakalo, okuhlanganisa nemali mboleko yokubuyisela ekhaya uma bedinga ukuzitholela ezohwebo. ongakhetha kukho. Lezo zinketho zokuhweba, vele, zisekhona endabeni yase-Ukraine. Kungakho izeluleko zayizolo ebusuku zinxuse abantu baseMelika ukuthi bacabangele ukuzitholela lezo zindlela zokuhweba, futhi inxusa limi ngomumo ukusiza kuleyo mizamo.
UMBUZO: Ngiyabonga, Ned.
Afghanistan Ambassador Australia Beirut Berlin China Estonia Europe I-European Commission Geneva Germany Uhulumeni Iran Israyeliis Korea I-Kyiv Lebanon I-NATO e-North Korea Paris Russia Ubudlova baseRussia amaRashiya I-Saudi Arabia igalikuni Ukraine I-United Arab Emirates izizwe Ezihlangene I-united states Vienna UVladimir Putin War White House Yemen
I-Blossom Hotel Houston Iqala Iphakheji Yosuku Lomama
I-GM entsha eqanjwe nge-Country Inn kanye ne-Suites ka-Radisson e...
Amazwe aphephe kakhulu emhlabeni ukuthuthela e...